Global Voices teny Malagasy » Shina: Mitsikilo ny fivezivezin’ny mpiserasera amin’ny finday · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Mitsikilo ny fivezivezin'ny mpiserasera amin'ny finday
Voadika ny 12 Marsa 2019 9:04 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Shina, Mediam-bahoaka, Solovava
Araka ny voalazan'ny Beijing Morning Post  tamin'ny 2 Martsa 2011, havadiky ny China Mobile Beijing ho fitaovana fanarahamaso ireo finday miisa 17 tapitrisa. Afa-manaraka ny fivezivezen'ny olona 24 ora isan'andro ny rafitra fitsikilovana.
Nilaza ny filoha lefitry ny vaomieran'ny siansa ao an-tanàna, sampana fampandrosoana ara-tsosialy, Li GuoGuang, fa efa nanome tolo-kevitra famatsiam-bola izy ireo ary i Hui Longguang (回龍觀) sy Tian Tongyuan (天通苑) no distrika atao fanandramana, izay samy any amin'ny faritra avaratr'i Beijing. Enim-bolana no faharetan'ny fe-potoana fanandramana ary raha mahomby, dia hihitatra any amin'ny faritra hafa ao an-tanàna ny tetikasa.
Ny anton'ny hananganana ny rafitra dia mba hanaraha-maso ny fifamoivoizana, na izany aza, nanaiky ihany koa i Li GuoGuang fa manampy amin'ny fitantanana ny mponina ilay rafitra, indrindra amin'ny fanarahamaso ny trangam-pihetsiketseham-bahoaka. Hahafantatra ny governemanta hoe firy eo ho eo ny olona mitangorona ao amin'ny distrika iray amin'ny fotoana iray. Nilaza ihany koa izy fa tsy hanitsakitsaka ny fiainana manokan'ny tsirairay ny rafitra.
Maro no mihevitra fa natao hanemporana ny “revolisiona Jasmine” ilay rafitra. Eny tokoa, noraràna ny adihevitra ampahibemaso momba ity rafi-panarahamaso ity, tsy namela sehatra ho an'ny vahoaka mba hanohitra ny tetikasa. Nofafàna tao amin'ny tranonkala vavahadin-tserasera tahaka ny Netease ny lahatsoratra ary tamin'ny tranga hafa, nakatona ny zoro fanehoan-kevitra.
Ao amin'ny Sina Weibo, mahafantatra ny fiantraikan'ny rafitra fanarahamaso toy izany ny olona. Nanomboka nampahatsiahy ny namany mba tsy hitondra ny findainy rehefa mivoaka hivorivory ny sasany tamin'izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/12/135563/
 Beijing Morning Post: http://tech.sina.com.cn/t/2011-03-02/02415232939.shtml